ILoft yale mihla eneNdlela eKhethekileyo - I-Airbnb
ILoft yale mihla eneNdlela eKhethekileyo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguΙάσων
Le loft yayakhiwe ngokuyintloko njengendawo yokuba neholide ezolileyo nezolileyo, isondele ngokwaneleyo esixekweni ukuze ibe nofikelelo olulula, kodwa ikude ngokwaneleyo ukuba ikhathazwe licala elibi nasiphi na isixeko esinayo. Indawo ihonjiswe luthando oluninzi kunye nomsebenzi onzima, kunye neenxalenye zefenitshala zenziwe ekhaya ngokupheleleyo. Inesinye sezona mbono zilungileyo esinokuthi sizinike isixeko kwaye ngokusisiseko sisiqinisekiso segama lendawo yokuhlala "Panorama". Wonke umntu wamkelekile ukuba abe nokuhlala ngokuzolileyo kwindawo yethu entle nengaqhelekanga.
Le ndawo inebhedi elingana neQueen kunye nesofa eyongezelekayo ephinda iguqule ibe yibhedi enkulukazi. Enye ibhedi enokwandiswa (yabantu ababini abongezelelweyo) inokongezwa xa iceliwe. Yomibini imigangatho yeloft inegumbi lokuhlambela, kumgangatho ophezulu kuphela onebhafu. Ukuze ufumane ukusuka kumgangatho wokuqala ukuya kumgangatho wesibini kufuneka ukhwele izitebhisi, ezinokuthi zincinci. Isilumkiso siyacetyiswa. Indawo ephezulu yokufudumeza umgangatho ngeentsuku ezibandayo kunye ne-air conditioning yasehlotyeni. Indlu yonke i-eco-friendly njengoko izanele kwaye uninzi lwamandla ayo avela kwiipaneli zelanga eziphezu kophahla.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, 1 iisofa eziyi-
Ubumelwane buzolile kwaye bukhuselekile. Ithathwa njengeyona ndawo iphezulu yaseThessaloniki. Kukho i-mini-market emnyango (1 min walk) apho unokuthenga phantse nantoni na. Ngamaxabiso angcono kufuneka ucinge ngokuya edolophini okanye kwilali yasePanorama. Kukho ipaki enkulu yale mihla yokudlalwa kwabantwana apho abazali banokubamba ikofu kumgama wokuhamba wemizuzu emi-5. Izinto onokuzenza eThessaloniki, jonga isikhokelo esisemthethweni sesixeko: https://thessaloniki.travel/en/
Umbuki zindwendwe ngu- Ιάσων
I'm 29 years old and I work in Berlin. Hope to meet you soon!
Ndiya kufumaneka kuphela ngefowuni, kodwa unokuhlala uqhagamshelana nabazali bam abahlala kufuphi kwaye uya kulungiselela izinto, njengezitshixo, iimfuno, iingxaki, njl.
Inombolo yomthetho: 00000305024
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Ελληνικά, Italiano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Panorama